Abshir Nuur Xuseen ayaa loo dilay inuu qeyb ka qaatey doorashadii Baarlamaanka 2016-2017
BALCAD, Soomaaliya - Kooxda Al-Shabaab, ee xiriirka la leh Al-Qaacid ayaa maanta oo Isniin ah meel fagaaro ah ku dishay Oday dhaqameed 93-sano jir ahaa, kaasi oo kamid ahaa Odayaashii soo dooratay Xildhibaanada Baarlamaanka 10-aad.
Allah ha u naxariistee Nabadoonka oo lagu magacaabi jiray Abshir Nuur Xuseen, oo loo yaqaaney (Abhir Maliis) ayaa lagu toogtay deegaanka Gamboole oo ku dhaw degmada Balcad ee gobalka Shabeellaha Dhexe.
Mid kamid ah dadka deegaanka oo la hadlay Warsidaha Garowe Online, isagoo ka gaabsaday magaciisa ayaa sheegay in dad badan, oo caruur iyo haween ay kamid ahaayeen ay kusoo qasbeen xoogaga Al-Shabaab inay uso daawasho tagaan toogashada odayga.
Marxuum Abshir ayaa mudo ku dhaw 4 bilood ku jiray gacanta Al-Shabaab, isagoo laga qabteya deegaanka xilli uu ku guda jiray xalinta khilaaf u dhaxeeyay Beeralay iyo xoolo-dhaqata halkaasi kawada degan.
Al-Shabaab ayaa horey wacad ugu maratay inay dilayso qof kasta oo ka qeyb qaatey dooarashada Xildhibaanada Baarlamaanka ee 2016-2017, iyadoo ku dishay Muqdisho iyo magaalooyinka kale ee dalka Odayaal badan.
Kooxdan xiriirka la leh Al Qaacida ayaa kordhisay weeradeeda gobolka Shabeellaha Dhexe...
Dagaal culus oo ka dhacay duleedka Muqdisho [Fahfaahin]
Soomaliya 15.08.2018. 17:50
Mareykanka oo duqeyn diyaaradeed ka fuliyey Jubbada Hoose
Soomaliya 15.10.2018. 22:34
Mid kamid ah Ergadii doorashada oo lagu dilay Muqdisho
Soomaliya 05.07.2018. 17:42
Mid kamid ah Ergooyinkii doorashada oo lagu dilay Muqdisho
Soomaliya 04.08.2018. 10:18